Quruxleyda Quruxda: Maxuu noqon lahaa sawirada ugu caansan marka ay maraan miiraha Photoshop? | Abuurista khadka tooska ah
Quruxleyda Quruxda: Sidee ayuu u ekaanayaa sawirada ugu caansan marka ay maraan miiraha Photoshop?
Fran Marin | | Dhiirrigelinta, Photoshop
Buugga quruxda ayaa isbeddelaya waqti ka dib. Wixii mar hore ka tirsanaan jiray fikradda quruxda maanta mar dambe iyo ma jiraan wax intaa ka badan oo loo fiirsanayo isbeddelka himiladan muddo ka dib taariikhda fanka. Rinjiyeyaasha sida Titian ama Gauguin waxay qurux ku heleen meydadkaas dumarka ah oo aad u tiro badnaa. Laakiin maxaa dhacaya haddii aan ka gudubno shaandhada hadda jirta shaqooyinka ugu caansan taariikhda farshaxanka? Ka socda shabakadda Qaado Su'aashan waxaa lagu soo jeediyay qaar ka mid ah hibada muuqaalka leh ee muuqaalka leh oo noqotay diiradda doodda arrintan ku saabsan.
Waxay la socdaan Adobe Photoshop waxay isku dayeen inay helaan fikrad aan macquul ahayn oo qurux iyo xayeysiis iyo warbaahinta waawayn marar badan waxay iska dhigaan in sharciga hadda jira uu dhab yahay oo la gaari karo. Sidaad ogtahay, noocyada kala duwan ee dib-u-hagaajinta ayaa la sameeyaa: yaree caloosha, jahawareer khadadka daamanka, ballaadhinta indhaha iyo dibnaha, xakamaynta duuduubka ama cellulite ... Runta ayaa ah in maanta ay aad u adag tahay in la ogaado marka sawirku leeyahay la fara-maroojiyay, sidaa darteed Dhinaca kale, tani waxay saameyneysaa aragtida ah in qaybaha ugu caqliga xun ee bulshadeenna ay leeyihiin carruur ahaan ama dhallinyaro ahaan. Hoos waxaan kugula wadaageynaa xulitaankan animations-ka si aan qaab muuqaal ah ugu aragno farqiga u dhexeeya fikradda hore ee quruxda iyo tan hadda jirta. Sideed u aragtaa mowduucan? Aragtidaada iigu dhaaf faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Quruxleyda Quruxda: Sidee ayuu u ekaanayaa sawirada ugu caansan marka ay maraan miiraha Photoshop?
Ka dib markay sii dhex mareen Photoshop, marka laga reebo kan ugu dambeeya ee sawir gacmeedka, waxay umuuqdaan inay ka soo baxeen Auschwitz.
Ku jawaab carperio
11 tallaabo oo ah astaanta saxda ah